10 amin'ireo toerana tsara indrindra hitsidihana an'i Afrika Atsimo
Afrika & Afovoany Atsinanana Afrika Atsimo
Tendrombohitra Tendrontany, Kapstadt. Jessica Macdonald
Fantatra amin'ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy ny fandeferana ara-tsosialy, Cape Town dia toeran'ny fitsangatsanganana ho an'ny mpitsidika marobe any Afrika Atsimo. Ny renim-pianakaviana dia nahazo tsindrin-javatra mahafinaritra, avy eny amoron-dranomasina fotsy fasiana ao amin'ny Saikinosy Kap ho any amin'ireo vatolampy mahatalanjona any amin'ny Tendrombohitra Mountain . Ny trano fisakafoanana dia sokajin'izao tontolo izao, ary toy izany koa ny divay. Mandania mafana am-pifaliana amin'ny tsenan'ny mpamboly amoron-dranomasina na ny fivarotana amin'ny V & A Waterfront; sy ny fiaramanidina, ny fiaramanidina, ny fanjonoana na ny fisaka amin'ny pingouins ao Boulders Beach. Feno sehatra ara-kolontsaina manan-danja ihany koa i Cape Town, anisan'izany ny Nosy Robben (izay nigadran'i Nelson Mandela nandritra ny 18 taona), ary ny fahasamihafan'ny apôstôzianina avy ao Bo-Kaap sy ny District Sext .
Ny Cape Winelands, Western Cape
Any atsinanan'i Cape Town no misy ny Cape Winelands, faritra manintona feno tendrombohitra matevina sy lohasaha lonaka. Ny mpitsidika dia tia ny faritra noho ny hakantony mahatalanjona mahatalanjona, ho an'ny kolontsainy (tsara indrindra aseho amin'ny arakaraky ny reniranon'i Cape Dutch any an-tanànany sy any amin'ny toeram-pambolena lavitra) ary ho an'ny tanimboliny malaza eran-tany. Misy faritra maromaro miavaka, izay malaza indrindra ao anatin'io Stellenbosch, Franschhoek, Wellington sy Paarl io. Ny tsirairay dia manolotra fitsangatsanganana divay sy toeram-pisakafoanana tsara tarehy, ary ny ankamaroany dia maneho ny vokatra tsara indrindra ao an-toerana ao amin'ny faritra ambanivohitr'i Western Cape. Manofana fiara iray ao Cape Town mba hijerena ireo tanimboalony tsy miankina, hamandrihana ny fijanonana any amin'ny B & B eo an-toerana na hijanona amin'ny fiara trambe Franschhoek.
Hijery ny bika rehetran'ity Hermanus ity. Jessica Macdonald
Any 120 kilometatra atsimo-atsinanan'i Cape Town, ny tanàna amoron-dranomasina any Hermanus dia nalaza ho renivohitry ny renivohitr'i Afrika Atsimo. Isan-taona dia miala sasatra ny morontsirak'i Hermanus ny trozona goavam-be atsimo, ary maro amin'izy ireo no mijanona mba hamboly sy hitroka ao an-tanànan'ny Walker Bay. Azonao atao ny mamandrika fitsangatsanganana miaraka amin'ny sambon'ny sambon'i Hermanus. na azonao atao ny mankafy ireo anton'ireo trozona afaka amin'ny iray amin'ireo teboka fitadiavana any amin'ny Cliff Path. Ao afovoan-tanàna, ireo trano fisakafoanana izay manana ny lanjany Gearing's Point dia toerana mahafinaritra mba hanamboarana sakafo gourmet rehefa mijery maso ny fandalovan'ny cetaceans. Ny fotoam-pilaminana dia maharitra hatramin'ny Jolay ka hatramin'ny Novambra.
Leisure Isle, Knysna. MATTES RenŽ / hemis.fr / Getty Images
Ny Route Garden Garden any Afrika Atsimo dia malaza eran-tany noho ny habetsahan'ny tanàna amoron-tsiraka, ary i Knysna no tena tsara indrindra amin'izy rehetra. Nipetrapetraka teo anelanelan'ny Tendrombohitra Outeniqua sy ny Ranomasimbe Indiana, i Knysna dia manolotra trano sy trano fialamboly maro be, ankoatra ny galleries, ny toeram-pivarotana sy ny foibe. Tena fantatry ny besinimaro ny toeram-pisakafoanana ao amin'ny seafood, izay ahitana mpihinam-boaloboka voaangona avy any an-tampon'ny tanàna. Manao fitsangantsanganana eny an-tampon'ny kantsana roa ao amin'ny Knysna Heads; Mandany andro an-jorom-bala eny amin'ny torapasika volamena ao Leisure Isle ary eo akaikin'i Brenton-on-Sea; na hiatrika ny biby lehibe indrindra eto an-tany ao amin'ny Knysna Elephant Park.
Ny Edge, Hogsback. Jessica Macdonald
Niorina tany amin'ny Tendrombohitra Amathole miala sasatra i Hogsback, tanàna malaza nilaza fa nahazo an'i JRR Tolkien (izay teraka tany Afrika Atsimo) izy rehefa nanoratra ny Tompon'ny Rings . Ny tontolo manodidina manodidina dia maitso, maitso sy voatokana miaraka amin'ireo làlam-pandehanana izay mitondra anao any anaty ala mankany andian-drano sy renirano miafina. Ny ala voajanahary indizeny koa dia milalao ny karazam-borona amam-borona, anisan'izany ny parrot, izay tena tandindomin-doza. Ny tanàna dia miorina amin'ny fehezan-teny fehezam-boninkazo. Eto ianao dia hahita bohemiana fivarotana trano fivarotana trano fivarotana, trano fonenana, trano famakiam-boky ary trano fandroana New Age. Ny tena mahagaga indrindra anefa dia ny fiheverana avy amin'ny hantsana ao The Edge Mountain Retreat.
Ny Transkei, Eastern Cape
Nolazaina ho toy ny tanindrazana mainty eo ambanin'ny apartheid, ny faritra Transkei dia heverina ho nisaraka avy any Afrika Atsimo. Ankehitriny, faritra feno ala tsy misy pentina mahafinaritra mahatalanjona izay mivoaka avy ao amin'ny Renirano Great Kei mankany amin'ny reniranon'i Umtamvuna ao atsinanan'i Cape. Satria ny toerana nahaterahan'ny mpitarika ny antoko mpanohitra, anisan'izany i Nelson Mandela , Walter Sisulu sy i Oliver Tambo, dia manana lova ara-kolontsaiki-pireharehana izy. Ny fomba fiainana ao Xhosa nentim-paharazana dia mbola hita any amin'ireo tanàna ambanivohitra lavitra, ary ny toeram-pirahalavam-be mikarokaroka dia misy ireo rondavel tsotra sy omby avy amin'ny indizeny Nguni. Miaraka amin'ireo tora-pasika nandao azy sy ny fiakaran-dranomandry, ny Transkei koa dia toerana ho an'ny mpanjono, mpitsangatsangana, mpitaiza sy mpankafy ny natiora.
Ny foibe kosmopolitanin'ny faritanin'i KwaZulu-Natal, dia fantatra amin'ny torapasika volamena, ny toetrany ety ivelany sy ny kolontsainy indianina. Toeram- pisakafoanana ao an-tanàna no misy ny trano fisakafoanana curry ; Ary aorian'ny fahamaizinana, misy andianà barazy sy trano fialan-tsasatra miandry (amin'ny fomba fijery tsara indrindra amin'ny cocktail anao, mankany amin'i Moyo amin'ny faran'ny uShaka Pier). Mandritra ny andro, ireo mpitsidika dia mamihina ny tontolo iainana fialan-tsasatra isan-karazany ao amin'ny Golden Mile Durban, trano any amin'ireo faritra malaza indrindra any Afrika Atsimo . Fialam-boly ankafizina iray hafa - raha misafidy ny hijery ny trano mimandan'ny Victoria Street Market ianao, na handany ny volanao any amin'ny toeram-pivarotana lehibe toy ny Gateway Theater of Shopping any Umhlanga.
Ny Tendrombohitra Drakensberg, KwaZulu-Natal
Fijerena avy amin'ny fihaonambe, Tendrombohitra Drakensberg. Karl Beath / Getty Images
Ny tendrony tendrombohitra uKhahlamba-Drakensberg dia manakaiky ny sisintanin'i Afrika Atsimo sy Lesotho, ary ahitana ny tampony avo indrindra ao amin'ny firenena. Toerana mahavariana mahavariana feno tafiotra mitatao sy mitatao lohasaha, ary ity no toerana tsara indrindra ho an'ireo tia am-pandehanana, mitaingina, soavaly fitondra, fiara fitaterana an-dranomandry ary rivo-pandeha. Ny andian-dian-tongotra manome ny fahaiza-manao rehetra, miaraka amin'ny safidy manomboka amin'ny dia an -tongotra mankany amin'ny fitsangatsanganana andro maromaro . Na izany aza anefa, misafidy ny hijery ianao, mitandrema amin'ny bibidia tsy dia fahita firy, anisan'izany ny karazam-borona 300 sy ny biby mampiavaka ny haavon-danitra toy ny clipspringer sy ny reedbuck. Ny tendrombohitra ihany koa dia ahitana ohatra tsara dia tsara momba ny zavakanto San rock taloha.
Sari-tany, Soweto. James Strachan / Getty Images
Soweto dia mety tsy ho toerana tsara indrindra any Afrika Atsimo, saingy azo antoka fa mihodina amin'ny maha-iray amin'ireo sehatra manan-danja indrindra amin'ny kolontsaina izay natolotry ny firenena. Toerana iray misy mponina any Johannesburg , tokotokony ho mponina maherin'ny 1,3 tapitrisa. Ny ankamaroan'ny tolona manohitra ny apartheid izay nilalao tao an-tranomaizina tao Soweto, ary ny tanàna dia tao anatin'ny ady iray virtoaly nandritra ireo taona 1970 sy 80 taona. Amin'izao fotoana izao, Soa dia mbola iharan'ny fahantrana mangeja sy ny tahan'ny heloka bevava. Na izany aza, dia an-tanindrazana ihany koa ny mozika sy ny teatra sasantsasany izay afaka manolotra an'i Afrika Atsimo. Miaraha amin'ny fizahantany tanàna iray mba hijery akaiky ny tantara sy kolontsain'ny faritra amin'ny toerana azo antoka. Azonao atao ny mijanona mandritra ny alina amin'ny B & B eo an-toerana.
Kruger National Park, Limpopo & Mpumalanga
Tany Safari, Kruger National Park. mozika / Getty Images
Ny valam-pirenena voalohany any Afrika Atsimo ihany koa no malaza indrindra, ary manome ny iray amin'ireo safari tsara indrindra any amin'ny kaontinanta. Any amin'ny farany avaratra atsinanan'ny firenena, ny Kruger dia manome karazana zavamaniry sy zavamaniry mahavariana mahatalanjona - anisan'izany ny Big Five any Afrika sy ireo Little Little malaza. Ny biby an-tanety dia mahavariana koa, miaraka amin'ny karazana 500 mahery voarakitra ao amin'ny valan-javaboary. Misy fomba maro tsy tambo isaina hijerena. Azonao atao ny manakarama fiara sy mitondra fiara amin'ny alàlan'ny làlana mahazatra ny valan-javaboary; na manoratra ho an'ny lalao fiara manokana ary mandray soa avy amin'ny fahalalana ny mpitarika efa za-draharaha. Ny fiara mandeha alina sy ny fiara safari dia tena ilaina koa. Raha mikasika ny trano fandraisam-bahiny, ny safidinao dia avy amin'ny toeram-ponenana an-trano mankany amin'ny trano fatoriana 5 kintana.
Nohavaozina ity lahatsoratra ity ary naverina nosoratan'i Jessica Macdonald tamin'ny 8 Janoary 2018.
Oviana no fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Afrika Atsimo?
8 Zavatra atao any Camps Bay, Afrika Atsimo
The Coolest Bars any Durban, Afrika Atsimo
Ady amin'ny toeram-pitsaboana: Azo antoka ve ny mandeha any Afrika Atsimo?
Trano fonenana ao Afrika
Ohatrinona ny saran'ny vidin'ny fiarandalamby any Phoenix?
Snowshoeing Around Albuquerque
Review: Iberostar Playa Mita ao amin'ny Riviera Nayarit
Ny Top 10 Things to Do in Brussels
Ny ankamaroan'ny fivarotana any Memphis
Bordeaux Diven, Shopping et Hotels
Jacksonville, Florida Faritra andrefana
Inona no hividianana kitapo voalohany ao amin'ny Kitanao voalohany ho an'i Shina
Inona no tokony hatao ao Akron mandritra ny fetin'ny ririnina
10 Soso-kevitra momba ny fiaramanidina miaraka amin'ny zazakely
Nudist Beaches any Espana
Willard Hotel any Washington, DC